Jaartiin Sababa Jaarsi isii haalaan isii jaalateef, akka na hiiku jettee mana murtii Shari'aatti himatte - NuuralHudaa
UAE tti guyyaa lama dura dubartiin takka, mana murtii Shari’aa Fujaira tti , jaalalli abbaan manaa kiyya anaaf qabu garmalee baay’atee jirra sababa jedhuun akka hiiku himata abbaa manaa isii irratti banuu Daily mail gabaase.
Jaartiin tun himata isii irratti: Abbaa manaa kiyyaan eega walfuunee waggaa tokko geenye jirra, turtii keenya kan waggaa tokko kanatti, jaarsi kiyya guyyuma tokkollee natti dallanee hin beeku, guyyaa irra Keennaa anaaf kenna, osoo na hin gaafatin mana keenyas qulqulleessa, nama mana tokko keessa waggaa guutuu waliin jiraate jidduu akkamitti waliitti bu’iinsi dhabama, haalli kun haga yoom akkasiitti itti fufa, jechuun akka adda bahan mana murtiitti himata bante.
Jaarsi isiitis mana murtiitti dhiyaate deebisaa Abbaa seeraaf keenne irratti: “Ani haga danda’u Jaarsa gaarii tahuuf tattaafii godha ture. Eega wal fuune amma waggaa tokko, Ilma namaa ta’ee kan hin dogogorre hin jiru, kanaaf dogogora kiyya irra baradhe akka of sirreessu carraan haa naaf keennamu” jechuun mana murtii gaafate.
Abbaan seeraa yaada isaan lamaani eega dhagaye booda, jaarsaa fi Jaartiin waliin mari’atanii rakkoo isaan jidduu jiru akka hiikan ajaja dabarse.
yaa Rabii Jazaakallah
qophii kessan gaarii dha itti haa fufu
Ajiib Ajii says:
Maasha Allha haaluma kanaan itti fufaa
baay,ee baay,ee namatti tolaa
mindaa keeyissan Rabbin jannataan isiiniif Hadeebisu Hojjettoonni NRH hundi keessanu!
Ajiibo Adam says:
Mubaarak Amaan says:
Asww.akkam jirtu nagaa jirtu Alhamdulillah nagaa jirra hojiin keessan baayyee natti toleera galatoomaa
Hasan Mahammad says:
Ahmedsiraj Muhmedjamel says:
mariyam husee says:
As wr wb Rabiin Isiniraa Haa Jalatuu
as wr wb maashaalh halii kesanii bayee naa gamachisera akanumati itfufa jzkk
Raahimaa Bint Muusaa says:
Yaa Rabbii Yaa Allah
Eng'r Redwan Zeko says:
Abbaa murtii Deebisaa sirriideebise
October 24, 2021 sa;aa 5:52 pm Update tahe